नेप्से स्थिर : वित्त समूहले सर्वाधिक कमाए
जेठ २४, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार शेयर बजार स्थिर बनेको छ ।
अघिल्लो आइतवार दिन १ दशमलव ७६ प्रतिशत बढेर २ हजार ९०६ दशमलव ९१ विन्दुमा बन्द भएको बजार सोमवार २ हजार ९०६ दशमलव ७० विन्दुमा स्थिर बनेको हो ।
यो दिन परिसूचकमा शून्य दशमलव शून्य १ प्रतिशत घटेको हो । २ हजार ९२८ दशमलव शून्य ९ विन्दुदेखि खुलेको बजार यो दिन २ हजार ८९२ दशमलव ९८ विन्दुसम्म झरेको थियो भने २ हजार ९३२ दशमलव ४० विन्दुुसम्म पुगेको थियो ।
यो दिन नेप्से परिसूचकसँगै सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि शून्य दशमलव शून्य ७ प्रतिशत बढेर ५२० दशमलव ६३ विन्दुसम्म पुगेको छ । सोमवारको बजारबाट वित्त समूहका लगानीकर्ताहरुले सर्वाधिक कमाएका छन् । यो दिन वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक ८ दशमलव २७ प्रतिशत बढेको हो ।
त्यस्तै विकास बैंकको परिसूचक पनि यो दिन ६ दशमलव २७ प्रतिशत बढेको छ । जलविद्युतको ३ दशमलव २३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत, अन्यको शून्य दशमलव २२ प्रतिशत, जीवन बीमाको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
वित्त समूहको परिसूचक सर्वाधिक बढेको दिन पोखरा फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स र आइसिएफसी फाइनान्सको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । यो दिन यी कम्पनीसँगै १७ कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा बढेको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकको ९ दशमलव ९८ प्रतिशत, श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्सको ९ दशमलव ९७ प्रतिशत, गुडवील फाइनान्सको ९ दशमलव ९६ प्रतिशत, जानकी फाइनान्सको ९ दशमलव ९५ प्रतिशत, गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंक एण्ड फाइनान्सको ९ दशमलव ९५ प्रतिशत, गोर्खाज फाइनान्सको ९ दशमलव ९५ प्रतिशत, मञ्जुश्री फाइनान्सको ९ दशमलव ९४ प्रतिशत, रिडी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ९१ प्रतिशत शेयरमूल्य बढेको छ ।
यसैगरी समृद्धि फाइनान्सको ९ दशमलव ८९ प्रतिशत, रिलायन्स फाइनान्सको ९ दशमलव ८१ प्रतिशत, नेशनल हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ८० प्रतिशत, युनिभर्सल पावरको ९ दशमलव ७१ प्रतिशत, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावरको ९ दशमलव ६१ प्रतिशत र सांग्रिला डेभलपमेण्ट बैंकको ९ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत शेयरमूल्य बढेको हो ।
व्यापारिक समूहका परिसूचक यो दिन सर्वाधिक २ दशमलव २१ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै बैंकिङ्गको १ दशमलव ६१ प्रतिशत, होटल्स तथा पर्यटनको १ दशमलव १७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत, लघुवित्तको शून्य दशमलव ४१ प्रतिशत र लगानी समूहको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत परिसूचक घटेको हो ।
सोमवार लक्ष्मी बैंकको शेयरमूल्य सर्वाधिक ३ दशमलव ५८ प्रतिशतले घटेको छ । लक्ष्मी बैंकको शेयरमूल्य यो दिन प्रतिकित्ता रू. १४ ले घटेर अन्तिम मूल्य रू. ३७७ कायम भएको हो ।
नेप्से परिसूचकसँगै सोमवार कारोबार रकम पनि अघिल्लो कारोबार दिनभन्दा कम भएको छ । आइतवार रू. १७ अर्ब २७ करोड १७ लाख ८७ हजार बराबरको ३ करोड ७४ लाख ५५ हजार १८९ कित्ता शेयर कारोबार भएकोमा सोमवार रू. १५ अर्ब ८१ करोड ८६ लाख ५९ हजार बराबरको ३ करोड ५४ लाख ७४ हजार ४१४ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो ।
यो कारोबार २२१ ओटा कम्पनीको १ लाख ५१ हजार ९४२ पटकको व्यापारमा भएको हो । सोमवार पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीकै सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ ।
यो दिन कम्पनीको रू. ६२ करोड १७ लाख २९ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य पनि प्रतिकित्ता रू. २६ ले बढेर अन्तिम मूल्य रू. १ हजार ९०१ कायम भएको छ । कम्पनीको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च मूल्य रहेको हो ।
सामान्य अंकले घट्यो शेयर बजार, करीब ११ अर्बको शेयर कारोबार[२०७८ असार, ३]
२९७०.४२ विन्दुमा परिसूचक, ७ अर्ब ५७ करोडको शेयर कारोबार (२ बजेको अपडेट)[२०७८ असार, ३]
०.११% ले बढेको बजारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक कारोबार (१ बजेको अपडेट)[२०७८ असार, ३]
कारोबारमा आएको सातौं दिनमा सीईडीबी हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य ६% ले घट्यो[२०७८ असार, ३]